Yusuf Garaad: Dastuurka Soomaaliya
Dastuurka Maxaa laga beddelay?
Wareysi Cabdi Xoosh iyo Yusuf-Garaad
Madaxweyne Cabdiraxman Shiikh, Goodax iyo Cabdi Xoosh (midig).
Wasiirkii hore ee Dastuurka, Cabdi Xoosh, ayaan Nairobi isku aragnay. Waxaan soo xusuustay muranka ku saabsan in dastuurka Soomaaliya wax laga beddelay maalmo yar ka hor intii aan la dooran Madaxweyne Xasan Shiikh. Eeddan waxaa soo jeediyay Madaxweynaha Puntland, Cabdiraxman Shiikh, oo ka mid ah saxiixayaashii Soomaaliya ka saaray Ku-Meel-Gaarka, isla markaana wadajirka u saxiixay dastuurka markii la ebyay. Wareysiga aan la yeeshay Wasiir Xoosh. Sidan ayuu u dhacay.
YG: Ma jirtaa in markii saxiixayaashii ay kuu soo gudbiyeen Dastuurka ka dib wax laga beddelay?
YG: Yaa beddelay?
YG: Goorma ayuu beddelay?
XOOSH: Waxaa la beddelay 07 Sept 2012. Maalmo yar ka hor intii aan Madaxweynaha la dooran.
YG: Saxiixayayaasha ma lagala tala geliyey is beddelka lagu sameeyay dastuurka?
YG: Oo maxaa dhacay?
XOOSH: Saxiixayaashu markii ay ii soo gudbiyeen Dastuurka waxaan hor dhigay Golaha Ansixinta Dastuurka oo ka koobnaa 825 ergay. Golaha ayaa isbeddelka dalbay.
YG: Maxaa laga beddelay?
XOOSH: Saddax meelood ayaa la taabtay.
YG: Maxay kala yihiin?
XOOSH: 1. Nuqulkii la soo gudbiyay waxaa ku yaallay in Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka ay wadajir u dooranayaan Aqalka Sare iyo Aqalka Hoose ee Baarlamaanka. Maaddaama aan Aqal Sare markaa jirin, waxaa la go'aansaday in dastuurka lagu kordhiyo qodob sheegaya in illaa Aqal Sare uu hirgalayo, in Awood kasta oo dastuurku siinayay Aqalka Sare, uu ku sii shaqeynayo Aqalka Hoose ee hadda jira. Waa qodob Dastuurka lagu soo kordhay, tirsigiisuna Waa 138 (2).
2. Qodob kale wuxuu ahaa is-waafajin. Nuqulkii la ii soo gudbiyay waxaa ku qornaa in Baarlamaanka cimrigiisu yahay afar sano. Madaxweynaha uu dooranayaana xilka haynayo shan sano. Arrinta iyadana Waa la is waafajiyay oo Madaxweynaha waxaa xilkiisa laga dhigay afar sano oo ah cimriga baarlamaanka isaga doortay.
3. Caasimadda dalku in ay tahay Muqdisho ayaa lagu caddeeyay dastuurka, taas oo aan awal ku caddeyn.
YG: Isbeddelladan saddexda ah ma waxaa sida ay yihiin u dalbaday Golaha Ansixinta Dastuurka?
YG: Baarlamaankaana waa la marsiinayay miyaa?
YG: Ma dhici kartaa in qodobbo kale dastuurka laga beddelay oo aadan adigu ka warqabin?
YG: Oo Sideed ku hubi kartaa?
Xoosh: Nuqulkii loo gudbiyay baarlamaanka iyo Qaramada Midoobay aniga ayaa saxiixay, mana jirin isbeddel kale. Intii ka dambeysayna waxaan ahaa xubin baarlamaan oo waan arki lahaa haddii isbeddel la sameynayo.
YG: Dastuurka hadda jira yaa wax ka beddeli kara?
Xoosh: Guddiga dib u eegista dastuurka ee ay Madax u tahay Mudane Maryan Cariif wuxuu u xil saaran yahay in uu soo bandhigo qodobbada u baahan wax ka beddelka talana u soo jeediyo baarlamaanka. Markaa Baarlamaanku wuu ka doodayaa hadduu isku raaco in la beddelana waxaa afti loogu bandhigayaa dadweynaha Soomaaliya.
Akhristow maxaa kaaaga baxay?
Posted by Yusuf Garaad at 03:45:00